Iindaba -I-FM entsha ye-Fangming ibhiyozela wonke umntu olonwabileyo ngoMeyi woSuku!
I-Fangming NewM ibhiyozela wonke umntu olonwabileyo ngoMeyi woSuku!
UMeyi uSuku lwaBasebenzi, olwaziwa njengo “Meyi 1st Int'l Labor Day” okanye “uSuku lwaBasebenzi lwaMazwe ngaMazwe okanye uSuku lukaCanzibe”, yenye yeholide yesizwe kumazwe angaphezu kwama-80 emhlabeni. Ukuseta ngoMeyi 1 ngonyaka ngamnye. Ngumthendeleko omnye ekwabelwana ngawo ngokudibeneyo ngabantu abasebenzayo kwihlabathi liphela.
NgoJulayi ngo-1889, iNkomfa yaMazwe ngaMazwe yesibini eyayikhokelwa ngu-Engels yabanjwa eParis, eFrance. Intlanganiso yapasisa isigqibo esichaza ukuba abasebenzi bamanye amazwe bazakubamba umatshi nge-1 kaMeyi, ngo-1890, kwaye bathatha isigqibo sokwenza umhla woku-1 kuCanzibe unyaka nonyaka njengoSuku lwaBasebenzi lwe-Int'l. IBhunga loLawulo likaRhulumente woRhulumente waBantu abaPhakathi weRiphabhlikhi yase China bathathe isigqibo ngo-Disemba 1949 ukumisela umhla we-1 kaMeyi njengoSuku lwaBasebenzi. Emva kowe-1989, iBhunga likaRhulumente ngokusisiseko lancoma imodeli yezabasebenzi yesizwe kunye nabasebenzi abaphambili rhoqo kwiminyaka emihlanu, malunga nabantu abangama-3000 ngalo lonke ixesha.
Ukubhekisa ”kwiSaziso se-Ofisi Jikelele yeBhunga likaRhulumente ngamalungiselelo eeholide ezithile ngo-2020”, ngokudibeneyo nemeko eyiyo yenkampani yethu, ngophando lwethu lwenkampani, ithathe isigqibo ngamalungiselelo acacisiweyo oMhla woku-1 we-Int'l yabasebenzi Iholide ka-2020njengale ilandelayo:
Iholide ukusukela ngoMeyi 1, 2020 ukuya ngoMeyi 5, 2020, ngokupheleleyo ziintsuku ezi-5.
Umsebenzi Qala ngoMeyi 6, 2020.
Ngeli xesha, nayiphi na imeko kaxakeka, nceda tsalela apha ngezantsi iiselfowuni:
Isebe lokuthengisa: 18673229380 Manager Umphathi wentengiso）
15516930005, uMphathi weNtengiso）
18838229829 (Umphathi wentengiso yokuthumela ngaphandle)